Martsa 2022: Ny tsara, ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software | Avy amin'ny Linux
Martsa 2022: Ny tsara, ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software
Linux PostInstall | 30/03/2022 06:00 | About us
Amin'ity volana fahatelo amin'ny taona ity sy ny andro farany amin'ny «Martsa 2022», toy ny mahazatra isam-bolana dia entinay anao ity kely ity famintinana, amin'ny sasany amin'ireo be indrindra zavatra vita an-tsoratra tamin'io vanim-potoana io.
Mba hahafahan'izy ireo mandinika (jereo, mamaky ary mizara) ny sasany amin'ireo tsara indrindra sy mifandraika indrindra fampahalalana, vaovao, torolàlana, boky torolàlana, torolàlana ary famoahana, avy amin'ny tranokalanay. Ary avy amin'ny loharano azo antoka hafa, toy ny tranonkala DistroWatch, la Free Software Foundation (FSF), la Open Source Initiative (OSI) ary ny Linux Foundation (LF).
Miaraka amin'izany fanangonana isam-bolana, manantena izahay toy ny mahazatra, afaka manaraka mora foana izy ireo amin'ny sehatry ny Rindrambaiko maimaim-poana, loharano misokatra ary GNU / Linux, sy ireo faritra hafa mifandraika amin'ny vaovao ara-teknolojia.
1 Martsa 2022 Famintinana
1.1 Inside FromLinux tamin'ny martsa 2022
1.1.4 Top 10: Lahatsoratra naroso
1.2 Avy amin'ny Linux tamin'ny martsa 2022
1.2.1 Navoakan'ny DistroWatch ny GNU/Linux Distro
1.2.2 Vaovao farany avy amin'ny Free Software Foundation (FSF / FSFE)
1.2.3 Vaovao farany avy amin'ny Open Source Initiative (OSI)
1.2.4 Vaovao farany avy amin'ny Linux Foundation Organization (FL)
Famintinana ny March 2022
Inside FromLinux in March 2022
Tavoahangy 2022.2.28-trento-2: Misy dikan-teny vaovao - Martsa 2022
AV Linux MX Edition: GNU/Linux tsara indrindra ho an'ny mpamorona votoaty
MX-Linux Raspberry Pi Respin "Ragout2": Navoaka ny dikan-teny farany!
Ny hackers dia mandrahona an'i Nvidia amin'ny famoahana angon-drakitra saro-pady raha tsy manolo-tena amin'ny mpamily loharano misokatra
Nahita fahalemena tao amin'ny cgroups v1 izy ireo izay mamela ny fivoahana amin'ny fitoeran-javatra mitokana
Dirty Pipe, iray amin'ireo vulnerability lehibe indrindra nandritra ny taona maro tao Linux
Hyperbola 0.4 dia efa navoaka ary efa an-dalana mankany amin'ny fifindra-monina OpenBSD
Linux Customization: Omeo ny GNU/Linux anao ny endrika sy ny endriky ny Windows!
Twister OS sy Twister UI: Distro ho an'ny Raspberry Pi sy Lohahevitra Visual Advanced
Top 10: Lahatsoratra naroso
De todito linuxero Mar-22: Topimaso fampahafantarana fohy momba ny saha GNU/Linux: Famoaham-baovao iray hijerena ny fomba nanombohan'ny vaovao Linux amin'izao volana izao. (View)
Red Hat dia manantena ny hihena ny fampiasana ny rindrambaiko ho an'ny orinasa: Manohana ny Open Source, izany hoe ny vondrom-piarahamonina open source. (View)
Top 10 fanampiny fanampiny mba hahazoana Firefox tsara indrindra sy azo antoka: Top ambony amin'ny fanampim-panampiana na fanitarana (plugins) mba hahazoana navigateur Internet haingana kokoa sy azo ampiasaina kokoa ary mamokatra kokoa. (View)
Kali Linux 2022.1 dia efa navoaka ary ireo no vaovao: Izay ahitana ny fanavaozana fitaovana NetHunter 2022.1, sy ny fanovana hafa, ny fanatsarana ary ny fanavaozana ny fizarana fototra. (View)
Nanangana hetsika izy ireo mba hampitomboana ny fifanarahana eo amin'ny mpitety tranonkala: Toa "miova izy ireo", ary ny tompon'ny navigateur web dia miara-miasa amin'ny orinasa iraisan'izy ireo. (View)
PolyCoder, kaody loharano misokatra miteraka AI izay mety hihoatra ny Codex: Mpamorona kaody vaovao mangatsiatsiaka miorina amin'ny maodely fiteny GPT-2 an'ny OpenAI. (View)
Efa navoaka ny bobongolo 1.1: Inona no vaovao ao amin'ny Linker maoderina ambony noho ny volamena GNU sy LLVM, izay azo ampiasaina ho fanoloana mangarahara haingana kokoa ho an'ny rohy GNU amin'ny rafitra Linux. (View)
Lalao Heroic Launcher: Native launcher ho an'ny lalao Epic sy lalao GOG: Mpanolotra teratany ho an'ny lalao Epic sy lalao GOG, izay miampita sehatra sy loharano misokatra ihany koa. (View)
OTPClient: Token'ny TOTP sy HOTP maimaim-poana miaraka amin'ny encryption naorina: Fampiharana GTK+ amin'ny fitantanana ny mari-pamantarana TOTP/HOTP miaraka amin'ny encryption naorina mba hikarakarana ny fanamarinana roa. (View)
Flatseal: Fitaovana hanamarinana sy hanovana ny fahazoan-dàlana amin'ny Flatpak Apps: App hitantana ny fahazoan-dàlana amin'ny fampiharana Flatpak amin'ny sary, mora ary haingana amin'ny GNU/Linux. (View)
Avy amin'ny FromLinux in March 2022
Navoakan'ny DistroWatch ny GNU/Linux Distro
Porteus Kiosk 5.4.0: Andro 28
boloky 5.0: Andro 27
4MLinux 39.0: Andro 26
Linux Mint 5 "LMDE": Andro 20
Lakka 4.0: Andro 18
FreeBSD 13.1-BETA2: Andro 18
IP Fire 2.27 Core 164: Andro 10
Zorin OS 16.1: Andro 10
LibreELEC 10.0.2: Andro 10
Sparky Linux 2022.03: Andro 08
OpenSUSE 15.4 Beta: Andro 02
Linux Avy amin'ny Scratch 11.1: Andro 01
EuroLinux 9.0 Beta: Andro 01
Hyperbola GNU/Linux-libre 0.4: Andro 01
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny tsirairay amin'ireo famoahana ireo sy bebe kokoa, kitiho ity manaraka ity rohy.
Vaovao farany avy amin'ny Free Software Foundation (FSF / FSFE)
Fandinihana andro voalohany ho an'ny LibrePlanet: “Fanafahana velona”: Androany 19 martsa no voalohany tamin'ireo andro roa nanaovana hetsika sy lahateny ho an'ny fihaonambe fanao isan-taona an'ny Free Software Foundation (FSF), LibrePlanet. Ny lohahevitry ny taona amin'ity taona ity dia 'Fanafahana velona', ary ny lahateny sy ny hetsika dia mifantoka amin'ny fomba hiainana fiainana malalaka kokoa amin'ny tontolo maoderina. (View)
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'io sy ny vaovao hafa amin'ny vanim-potoana iray ihany dia tsindrio ireto rohy manaraka ireto: FSF y FSFE.
Vaovao farany avy amin'ny Open Source Initiative (OSI)
Ny 'protestware' open source dia manimba ny open source: Ity herinandro ity dia manamarika iray volana nanomboka ny adin'i Putin tamin'i Okraina. Nolazainay ny toeran'ny OSI tamin'izany fotoana izany: Ny OSI dia manameloka ny fanafihana an'i Okraina nataon'ny tafika Rosiana teo ambany fitarihan'i Vladimir Putin, saingy misy fivoarana vaovao izay miantraika mivantana amin'ny vondrom-piarahamonina open source ary mitaky fanehoan-kevitra fanampiny. (View)
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'io sy ny vaovao hafa amin'ny vanim-potoana iray ihany dia tsindrio ity manaraka ity rohy.
Vaovao farany avy amin'ny Linux Foundation Organization (FL)
Ny Linux Foundation sy ny Harvard Laboratory for the Science of Innovation dia mamoaka ny fanisam-bahoaka amin'ireo tranomboky fampiharana open source be mpampiasa indrindra.: Ny Linux Foundation androany dia nanambara ny famoahana farany ny “Census II of Free and Open Source Software – Application Libraries”. Ity fanadihadiana ity dia mitatitra izay fonosana loharano misokatra, singa ary tetikasa miantoka ny hetsika mavitrika sy ny fanohanana fiarovana. (View)
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'io sy ny vaovao hafa amin'ny vanim-potoana iray ihany dia tsindrio ity manaraka ity rohy: Blog, Vaovaon'ny tetikasa y Famoahana gazety.
Raha fintinina dia antenainay izany "kely sy mahasoa news compendium " miaraka amin'ny fanasongadinana anatiny sy ivelan'ny bilaogy «DesdeLinux» amin'ity volana faharoa amin'ny taona ity, «marzo 2022», tena ilaina amin'ny ankapobeny «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary mandray anjara betsaka amin'ny fanatsarana, fitomboana ary fanaparitahana ny tontolon'ny rafi-tontolo iainana misy «GNU/Linux».
Ary raha tianao ity lahatsoratra ity, aza atsahatra ny fizarana izany amin'ny hafa amin'ny tranokala tianao, fantsona, vondrona na vondrom-piarahamonina misy tambajotra sosialy na rafitra fandefasan-kafatra. Farany, tsidiho ny pejy fandraisana en «Avy amin'ny Linux» hizaha vaovao bebe kokoa, ary hiditra amin'ny fantsona ofisialinay Telegram avy amin'ny FromLinux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Martsa 2022: Ny tsara, ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software
Efa eto ny Chrome 100 ary ireto ny vaovao
Navoaka sahady ny kinova vaovao an'ny Java SE 18 ary ireto ny vaovaony